Daniel 1 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian American Sign Language Amharic Arabic Argentinean Sign Language Armenian Armenian (West) Australian Sign Language Austrian Sign Language Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Batak (Dairi) Batak (Toba) Belgian French Sign Language Bicol Bislama Bolivian Sign Language Brazilian Sign Language British Sign Language Bulgarian Cambodian Cebuano Chichewa Chilean Sign Language Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chinese Sign Language Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cibemba Colombian Sign Language Costa Rican Sign Language Croatian Croatian Sign Language Cuban Sign Language Czech Czech Sign Language Danish Dutch Dutch Sign Language Ecuadorian Sign Language Efik English Estonian Ewe Fijian Filipino Sign Language Finnish French French Sign Language Ga Galician Georgian German German Sign Language Ghanaian Sign Language Greek Greek Sign Language Guarani Guatemalan Sign Language Gujarati Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hiri Motu Honduras Sign Language Hungarian Hungarian Sign Language Igbo Iloko Indian Sign Language Indonesian Indonesian Sign Language Irish Sign Language Isoko Israeli Sign Language Italian Italian Sign Language Jamaican Sign Language Japanese Japanese Sign Language Javanese Kannada Kazakh Kenyan Sign Language Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kongo Korean Korean Sign Language Kosraean Latvian Lingala Lithuanian Luganda Luo Luvale Macedonian Madagascar Sign Language Malagasy Malawi Sign Language Malay Malayalam Malaysian Sign Language Maltese Marathi Maya Mexican Sign Language Mozambican Sign Language Myanmar Navajo Nepali New Zealand Sign Language Nias Nicaraguan Sign Language Nigerian Sign Language Norwegian Nzema Oromo Ossetian Otetela Panamanian Sign Language Pangasinan Paraguayan Sign Language Pennsylvania German Persian Peruvian Sign Language Polish Polish Sign Language Portuguese Portuguese (European) Portuguese Sign Language Punjabi Quebec Sign Language Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Huallaga Huánuco) Romanian Russian Russian Sign Language Salvadoran Sign Language Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovak Sign Language Slovenian Slovenian Sign Language South African Sign Language Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Swedish Sign Language Swiss German Sign Language Tagalog Tahitian Taiwanese Sign Language Tajiki Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Thai Sign Language Ticuna Tigrinya Tok Pisin Tongan Tshiluba Tsonga Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Umbundu Uruguayan Sign Language Uzbek Uzbek (Roman) Venda Venezuelan Sign Language Vietnamese Waray-Waray Xavante Xhosa Yoruba Zambian Sign Language Zimbabwe Sign Language Zulu
Ndị Babịlọn nọchibidoro Jeruselem (1, 2)
E nyere iwu ka a zụọ ụmụaka si n’ezinụlọ eze (3-5)
A nwalere ụmụaka Hibru anọ (6-21)
1 N’afọ nke atọ n’ọchịchị Jehoyakim+ Eze Juda, Nebukadneza Eze Babịlọn bịara Jeruselem nọchibido ya.+ 2 Ka oge na-aga, Jehova nyefere Jehoyakim Eze Juda n’aka Nebukadneza.+ Nebukadneza bukwaara ụfọdụ n’ime arịa ndị dị n’ụlọ* ezi Chineke ma buga ha na Shaịna,*+ n’ụlọ chi ya. O busara arịa ndị ahụ n’ebe a na-edowe akụ̀ n’ụlọ chi ya.+ 3 Eze wee gwa Ashpenaz, onyeisi ndị na-eje ozi n’obí ya, ka ọ kpọta ụfọdụ n’ime ndị Izrel, ma ndị si n’ezinụlọ eze ma ụmụ ndị a ma ama.+ 4 Ha ga-abụ ụmụaka na-enweghị nkwarụ ọ bụla, ndị mara mma, ndị ma ihe nke ọma, ndị nwere ọgụgụ isi, ndị na-aghọtakwa ihe.+ Ha ga-abụkwa ndị nwere ike ije ozi n’obí eze. Ọ ga-akụziri ha otú e si ede na otú e si asụ asụsụ ndị Kaldia. 5 Eze nyekwara iwu ka e si n’ihe oriri a na-enye eze nakwa ná mmanya ọ na-aṅụ na-enye ụmụaka ndị ahụ nri na mmanya kwa ụbọchị. A ga-azụ ha afọ atọ. Afọ atọ ahụ gwụ, ha ga-amalite ijere eze ozi. 6 Ụfọdụ n’ime ụmụaka ahụ si n’ebo Juda.* Ha bụ Daniel,*+ Hananaya,* Mishel,* na Azaraya.*+ 7 Onyeisi ndị na-eje ozi n’obí eze gbanwere aha ha.* Ọ gụrụ Daniel Belteshaza,+ gụọ Hananaya Shedrak, gụọ Mishel Mishak, gụọ Azaraya Abednego.+ 8 Ma Daniel kpebisiri ike n’obi ya na ya agaghị eri nri eze ma ọ bụ ṅụọ mmanya ọ na-aṅụ maka na ha ga-emerụ ya. N’ihi ya, ọ rịọrọ onyeisi ndị na-eje ozi n’obí eze ka o kwe ka ya ghara iri ihe ndị ahụ ga-emerụ ya. 9 Ezi Chineke wee mee ka onyeisi ndị na-eje ozi n’obí eze nweere Daniel obiọma ma meere ya amara.+ 10 Ma onyeisi ndị na-eje ozi n’obí eze sịrị Daniel: “M na-atụ onyenwe m eze egwu. O kwuru ihe unu ga na-eri na ihe unu ga na-aṅụ. Ọ bụrụkwanụ na ọ hụ na unu adịghị mma n’anya otú ụmụaka ndị ọgbọ unu dị? Eze ga-ewerezi m ka onye ikpe mara.” 11 Ma Daniel gwara onye na-elekọta ha, ya bụ, onye onyeisi ndị na-eje ozi n’obí eze họpụtara ka ọ na-elekọta Daniel, Hananaya, Mishel, na Azaraya, sị: 12 “Biko, ka a na-enye anyị akwụkwọ nri* ka anyị na-eri nakwa mmiri ka anyị na-aṅụ, ka a hụzie ihe ga-eme ná ngwụcha ụbọchị iri. 13 Ụbọchị iri gachaa, jiri otú anyị dị tụnyere otú ụmụaka ndị na-eri nri eze dị, jirizie ihe ị ga-ahụ kpebie ihe ị ga-eme anyị.” 14 Onye ahụ na-elekọta ha kwetara ihe ha kwuru ma nye ha ụbọchị iri ka ọ hụ ihe ga-eme. 15 Mgbe ụbọchị iri ahụ gachara, ahụ́ dị ha mma, ha bukwara ibu karịa ụmụaka niile ndị nọ na-eri nri eze. 16 Onye ahụ na-elekọta ha wee na-enye ha akwụkwọ nri kama inye ha nri na mmanya eze kwuru ka a na-enye ha. 17 Ezi Chineke mere ka ụmụaka anọ a nwee ọgụgụ isi, ka ha na-aghọta ihe dị iche iche e dere ede* nakwa ka ha mara ihe. Daniel na-aghọtakwa ụdị ọhụụ ọ bụla na nrọ ọ bụla.+ 18 Mgbe oge eze kwuru ka a kpọta ha n’ihu ya ruru,+ onyeisi ndị na-eje ozi n’obí eze kpọtara ha n’ihu Nebukadneza. 19 Mgbe ha na eze kwuru okwu, e nweghị onye n’ime ha niile dị ka Daniel, Hananaya, Mishel, na Azaraya.+ Ha wee na-ejere eze ozi. 20 Mgbe ọ bụla eze jụrụ ha ihe a ga-eme n’okwu ọ bụla e kwesịrị iji amamihe na nghọta leba anya, ọ na-achọpụta na ihe ha na-aza na-eji okpukpu iri aka ihe ndị dibịa anwansi niile na ndị dibịa afa niile+ nọ n’ebe niile ọ na-achị na-aza mma. 21 Daniel nọgidekwara n’ebe ahụ ruo n’afọ nke mbụ n’ọchịchị Eze Saịrọs.+
^ Ma ọ bụ “n’ụlọ nsọ.”
^ Ya bụ, Babịlonia.
^ Na Hibru, “bụ ụmụ Juda.”
^ Daniel pụtara “Chineke Bụ Onyeikpe M.”
^ Hananaya pụtara “Jehova Emeela Amara.”
^ O nwere ike ịbụ na Mishel pụtara “Ònye Dị Ka Chineke?”
^ Azaraya putara “Jehova Enyela Aka.”
^ Ya bụ, ọ gụrụ ha aha ndị Babịlọn.
^ O nwere ike ịbụ na okwu Hibru a sụgharịrị “akwụkwọ nri” pụtakwara ụdị mkpụrụ osisi dị iche iche na mkpụrụ ndị ọzọ a na-eri eri.
^ Ma ọ bụ “otú dị iche iche e si ede ihe.”